“အချစ်မှာအသက်အရွယ်ကွာခြားမှုက စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေလား”မေးခွန်းကို Jung Hae In ဖြေခဲ့ပုံက… – Trend.com.mm
“အချစ်မှာအသက်အရွယ်ကွာခြားမှုက စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေလား”မေးခွန်းကို Jung Hae In ဖြေခဲ့ပုံက…
Posted on October 16, 2018 by Noel
အောက်တိုဘာ ၁၅ရက်နေ့က MBCရဲ့  “Section TV”အစီအစဉ်မှာ ၂၀၁၈ APAN Star Awards ဆုပေးပွဲက နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆုရခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jung Hae In ဟာလည်း ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Kim Jung Hyun က ဒီဆုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ “ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းကို ပရိသတ်တွေကကြိုက်ကြတဲ့
အတွက် သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲ။နောက်ထပ်လည်း ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကူးတဲ့အခါ ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါ။နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်နဲ့ပရိသတ်ရှေ့ကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်”လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လုိ့အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုက ဆူးငြောင့်ခလုတ်ဖြစ်စေလား၊စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေလားလို့မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ Jung Hae In က “ကျွန်တော့်ရဲ့ ideal type မိန်းကလေးက ကျွန်တော့်ထက်ငယ်ရင်ငယ်၊ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ထက်ကြီးတာမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ ချစ်မိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ အသက်ကြီးတာဖြစ်စေ၊ငယ်တာဖြစ်စေ၊ရွယ်တူဖြစ်စေ အရေးမကြီးတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်”ဆိုပြီး ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Jung Hae In က 2018 APAN Star Awards ဆုပေးပွဲမှာ K-Star Award နဲ့ Global Star Award ဆုနှစ်ဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ တကယ်ချစ်မိသွားရင်အသက်အရွယ်က အရေးမကြီးတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ပရိသတ်ကြီးရော ဒီအယူအဆလေးကိုသဘောတူရဲ့လား?
အောကျတိုဘာ ၁၅ရကျနကေ့ MBCရဲ့“Section TV”အစီအစဉျမှာ ၂၀၁၈ APAN Star Awards ဆုပေးပှဲက နာမညျကြျောအနုပညာရှငျတှကေိုဖိတျချေါမေးမွနျးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ဆုရခဲ့သူတဈယောကျဖွဈတဲ့ Jung Hae In ဟာလညျး ဒီအစီအစဉျမှာပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
အစီအစဉျတငျဆကျသူ Kim Jung Hyun က ဒီဆုရတာနဲ့ပတျသကျပွီး သူ့ကိုမေးမွနျးကွညျ့တဲ့အခါ “ကြှနျတျောရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှဲတိုငျးကို ပရိသတျတှကေကွိုကျကွတဲ့အတှကျ သူတို့ကိုကြေးဇူးတငျရမှာပါပဲ။နောကျထပျလညျး ဇာတျလမျးတှဲတှေ၊ရုပျရှငျတှရေိုကျကူးတဲ့အခါ ကြှနျတျောအကောငျးဆုံးကွိုးစားသှားမှာပါ။နောကျထပျဇာတျလမျးတှဲအသဈနဲ့ပရိသတျရှကေို့ပွနျလာခဲ့ပါမယျ”လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီနောကျ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလို့အသကျအရှယျကှာခွားမှုက ဆူးငွောငျ့ခလုတျဖွဈစလေား၊စိုးရိမျစရာဖွဈစလေားလို့မေးမွနျးကွညျ့တဲ့အခါမှာ Jung Hae In က “ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ideal type မိနျးကလေးက ကြှနျတေျာ့ထကျငယျရငျငယျ၊ဒါမှမဟုတျ ကြှနျတေျာ့ထကျကွီးတာမြိုးပါ။ဒါပမေဲ့ ခဈြမိသှားတယျဆိုရငျတော့ အသကျကွီးတာဖွဈစေ၊ငယျတာဖွဈစေ၊ရှယျတူဖွဈစေ အရေးမကွီးတော့ဘူးလို့ ကြှနျတျောထငျပါတယျ”ဆိုပွီး ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
Jung Hae In က 2018 APAN Star Awards ဆုပေးပှဲမှာ K-Star Award နဲ့ Global Star Award ဆုနှဈဆုကိုရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အခဈြနဲ့ပတျသကျတဲ့သူ့ရဲ့ခံယူခကျြကတော့ တကယျခဈြမိသှားရငျအသကျအရှယျက အရေးမကွီးတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ပရိသတျကွီးရော ဒီအယူအဆလေးကိုသဘောတူရဲ့လား?
Posted in Korean, Movies, News
Victoria’s Secret မော်ဒယ်လ်တွေရဲ့အလှအပရေးရာထိန်းသိမ်းပုံတစ်ချို့…